DNA ninkan usoo dhiciyay dhaxal dhan 50 milyan $ - NorSom News
DNA ninkan usoo dhiciyay dhaxal dhan 50 milyan $
Jordan Adlard Rogers waa 31-sano jir u dhashay dalka Ingiriiska. Wuxuuna dhawaan si kadis ah xaq ugu helay dhaxal dhan 50 milyan Pound.
Ninkan oo ka shaqeynayay goob lagu xanaaneeyo dadka waaweyn, ayaa sheegay in ilaa waagii uu yaraa uu ka shakisnaa in aabihiis uu yahay nin lagu magacaabo Charles Rogers. Uuna horey isaga qaaday dhiiga DNA, si loo xaqiijiyo arintaas, balse aan warkiisa la dhageysan.
Dhawaan ayuu sheegay inuu mar kale iska qaaday dhiiga DNA-ga, waxaana soo baxday in aabihii uu yahay Charles Rogers.
Odeyga ninkan dhalay ee Rogers ayaa dhintay sanadkii 2018, ayaa ka tagay hanti maguurto ah oo qiimaheeda lagu qiyaasay 50 milyan $, waxaana hantidaas dhamaanteed dhaxak ahaan u helay Jordan oo ah qofka kali ah ee ka haray faraca Rogers.
Jordan oo sheegay inuu la daalaa dhacayay bixinta masruufkiisa nololeed ayaa si uusan fileyn ku noqday milyan dheer, isaga oo hada qiyaasta hantidiisa kagu qiyaasay 50 milyan.
Previous articleNorway: Wasiir hore oo ku eedeysan kufsi uu u geystay wiilal dhalinyaro soo galooti ah